Wada shaqeyn xanaaq badan ayaa shalay ahayd! Aynu diyaarinno mashruucaaga adag iyo shaqada kooxeed. Waxaan kaa caawinaa cilmi baarista, tusaha, waxyaabaha ku jira, bandhigyada ama waxaan bixinaa xirmo dhameystiran.
Shaqada mashruuca - is qor	oder	ha qorto
Shaqada mashruuca inta lagu jiro shahaadada waa in lagu sameeyaa siyaabo kala duwan. Ma jiraan maadooyin gaar ah oo loogu talagalay shaqada mashruuca. Qaabkan shaqada gurigu wuxuu ardayda siiyaa baahiyo gaar ah. Dhinac, waa ku shaqeynta koox. Dhinaca kale, mashruuc mashruucu wuxuu muujinayaa inay ardaydu barteen ku dhaqanka mabaadi'da teori. Shaqo madaxbanaan ayaa loo baahan yahay sayniskana waxaa lagu gudbiyaa koox. Sidaa darteed shaqada mashruuca waxaa lagu fuliyaa dhowr heerar oo kala duwan. Marka la barbardhigo shaqada guriga oo qoraal ah, mala-awaallo kala duwan iyo xalal suurtagal ah ayaa kooxda looga wada hadlayaa Doodda, sidaas darteed, dhinacyada cusub ayaa lagu xisaabtamayaa kuwaas oo laga yaabo inaan lagu tixgelin shaqo madax bannaan oo kooxeed. Tani waxay ka dhigeysaa shaqada mashruuca mid xiiso u leh qof kasta oo ku lug leh, laakiin waxay u baahan tahay qadar wanaagsan oo wada shaqeyn xubnaha kooxda ah. Wadashaqeyntu waa shaqo wada shaqeyn ah ee ma ahan fulinta fikradahaaga gaarka ah ee ka dhanka ah dhammaan iska caabbinta kooxeed.
Si kastaba ha noqotee, inaad awood u leedahay inaad ku shaqeyso koox macnaheedu maahan inaad ka hooseyso xubnaha kale ee kooxda. Koox ayaa sidoo kale ku nool khilaafaadka iyo dhaleeceynta. Wadahadalka kooxda dhexdeeda ayaa markaa ah arrin aad muhiim u ah. Isgaarsiinta waxaa loola jeedaa isdhaafsiga macluumaadka iyo calaamadaha. Si kastaba ha noqotee, isgaarsiinta ayaa aad uga badan hadalka hadalka. Awoodda iyo kartida lagu wada xiriirikaro luqadda ayaa ah waxa aadanaha ka sooca dhammaan noolaha dunida ku nool. Xayawaanku sidoo kale waxay leeyihiin fursad ay ku wada xiriiraan. Laakiin tan badanaa waxay ka dhacdaa aagga aan hadalka lahayn. Isgaarsiinta ayaa ka badan luuqadda. Baaxadda ballaaran ee fursadaha aan hadalka aheyn waxaa ka mid ah tilmaam, cod cod, iyo muuqaalka inta la hadlayo. Xaqiiqdii, isgaarsiinta afka waa 10% kaliya waxa aan dhab ahaan u aragno. Inta badan macluumaadka waxaa loogu gudbiyaa si aan hadal ahayn. Sayniska isgaarsiinta wuxuu soo jiitay jaangoynta ay macluumaadka ugu keydsan yihiin xusuusteenna: kaliya 10% waxa la akhriyo ayaa lagu farsameeyaa xusuusta. Ugu badnaan 20% wada hadalka ayaa la keydiyaa. Inta badan - inta soo hartay 70% - ee macluumaadka waxaa lagu gudbiyaa iyadoo la adeegsanayo calaamadaha aan hadalka aheyn.
Shuruudaha shaqada kooxeed
Sida laga soo xigtay Lencioni, Shanta Waxqabad ee Kooxda (2002), waxaa jira shan waji oo muhiim ah oo aan daruuri u ahayn faa'iido u leh ka shaqeynta koox.
Taa bedelkeeda, waxaa jira shuruudo tilmaamaya wada shaqeynta kooxda. Xubnaha kooxdu waxay leeyihiin xiiso weyn natiijooyinka lagu gaari karo waqti cayiman. Mas'uuliyadda ka saaran kooxda iyo kooxdaba waxay gelineysaa dano shaqsiyeed asalka. Wadajirka ka dhashay markasta wuxuu keenaa jawaab celin togan. Waxsoosaarka kooxda ayaa ugu horreeya. Horumarinta wadajirka ah ee xalalka sayniska waxay ka dhalataa dulqaadka fikradaha kala duwan.
Caawinaad xirfad leh oo ku saabsan shaqada mashruuca
Sida shaqo kasta oo cilmiyaysan, shaqo mashruuc waxay ku lug leedahay cilmi baaris badan oo suugaaneed iyo qorista natiijooyinka (qayb ahaan). Inta lagu guda jiro waxbarashadaada maahan inaad kaliya wax ka qabato shaqada mashruuca hadda socota. Waa inaad u diyaar garowdaa imtixaannada iyo casharrada kale ee guriga isla waqtigaas. Waqtigu wuu kaa dhacayaa sidaa darteed si dhib leh uma aragtid suurtagal macquulnimo ah oo lagu qoro shaqada mashruuca gaarka ah waqtiga la siiyay. Xaaladdan oo kale, waa inaad caawimaad ka heshaa hay'addayada qorista qoraalka. Qorayaasheennu waxay ka yimaadeen dhammaan xirfadaha tacliimeed ee leh shahaadooyinka jaamacadeed ee u dhigma. Sidaa darteed dhib weyn naguma aha inaan kormeerno qoraaga kugu habboon shaqadaada.
U dirida shaqadaada mashruuca mid ka mid ah qorayaashayada ayaa markaa ah waxqabad sharci. Waxaad ku lug leedahay qoraaga cirfiidka mashruucaaga. Isweydaarsiga xiisaha leh ee adiga iyo annaga ama qoraagayagu wuxuu ku siin doonaa fikrado cusub oo aad kaga wada hadli karto dooda kooxda.
Diiwaanka qoraalka ah ee qaybtaada mashruuca waa aasaaska qiimeynta xigta. Sidaa darteed waa muhiimad weyn in lagu gaaro fasal wanaagsan oo wanaagsan halkan. U hoggaansanaanta shuruudaha shaqada sayniska waxaa damaanad qaaday shaqadeena. Kahor natiijada qoraalka ugu dambeeya ee qeybtaada shaqada mashruuca laguu soo dirin, shaqadu waxay mareysaa heerar kala duwan oo ah maaraynta tayada shirkadeena. Tan waxaa ka mid ah baaritaanka xatooyada, oo lagu fuliyo saddex marxaladood. Marxaladda koowaad waa imtixaanka shaqada ee softiweerka khayaanada, maadaama hadda laga isticmaalo jaamacadaha iyo kulliyadaha. Waxaan isticmaalnaa dhowr nidaamyo software oo madax-bannaan. Haddii ay jirto warbixin la xaday oo ah been abuur, ghostwriter ayaa lagu wargalin doonaa iyadoo la codsanayo in la beddelo qaybaha qoraalka ee khuseeya.
Tallaabada labaad waxaa ka mid ah imtixaan uu qaadayo maareeyahayaga tayada leh. Jeegga waxaa lagu fuliyaa gacanta iyadoo la hubinayo marinnada qoraalka ee internetka.
Tallaabada saddexaad waa in la hubiyo in xigashada ay sax tahay. Dhammaan xigashooyinka waa la eegay waana laga hubiyaa xigasho sax ah.
Shaqada ayaa markaa laga hubiyaa u hogaansanaanta saxda ah ee nidaamka loo qoray. Tifatirka wuxuu ka kooban yahay sixid qoraal
Tafatirka xirfadeed wuxuu u weecin doonaa qoraalkaaga sayniska fasalka koowaad.
"Ma aanan rajeyneynin shaqo wanaagsan oo mashruuc ah!"
Bachelor-ka Daraasaadka Dhaqanka
Xilliga kama dambaysta ah ee soo gudbintaadu waa soo dhowdahay, weli waa inaad barataa oo aad wax ka ogaataa imtixaannada jaamacadeed ee soo socda Dhibaatooyinka waqtiga awoodin inuu sii wado? Dhismaha wada shaqeynta kooxeed ayaa sidoo kale midho yar dhalisa waxayna isu rogtaa qibrad jahwareer leh.
Dhib ma leh, waxaan halkan u joognaa inaan ku caawinno! Anaga waad naga helaysaa caawimaad xirfadeed ka khibrad iyo qoraaga ghostwriter, iyada oo aan loo eegin mawduuca! Qorayaashayaga ghostwriters waxay leeyihiin dulmar guud oo casri ah oo ku saabsan suugaanta qaybtooda, waxay aad u yaqaanaan eraybixinta laxiriira waxayna yaqaanaan sida loo isticmaalo hababka maadooyinka gaarka u ah si sax ah si loo hagaajiyo Shaqada mashruuca si guul leh loo dhammaystiro Iyada oo kooxdeena ay garab taagan tahay, waad wax u baran kartaa imtixaannada soo socda oo mar dambe uma baahnid inaad ka walwasho shaqadaada saynis Shaqada mashruuca samee iyada oo aan walwal kooxeed jirin.